प्रविधि निरन्तर अग्रिम छ। हरेक दिन, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जो सबै उपकरण अद्यावधिक गर्न र पूर्ण मालिकहरूको आवश्यकताहरु अनुरूप छ भन्ने हो, अधिक मांग भएका छन्। छ केही वर्ष पहिले 100 एमबी प्रति दोस्रो वही मुसीबत केही छलफल भएको थियो वास्तविक देखिन्छ, तर अब यो एक वास्तविकता छ। यस्तो उपलब्धि युएसबी-मोडेम 4G धन्यवाद बुझे थियो।
केही मालिक तिनीहरूले मात्र नेटवर्क समर्थन गर्ने राउटर आवश्यक त क्रममा उच्च गति इन्टरनेट रमाइलो गर्न ठान्छन्। तर, यो भ्रामक छ। आफ्नो खरीद मा निराश हुन छैन, तपाईं केही बुँदाहरूमा ध्यान गर्न आवश्यक छ। हामी सबैलाई 4G-routers बारेमा थाहा हुनुपर्छ कि सिक्न लेख, साथै केही निर्माता, उपभोक्ता राय, विचार लायक मा, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मोडेल विचार गर्नुहोस्।
तपाईं एक 4G युएसबी-मोडेम किन्न अघि, जो को मूल्य कम र उच्च दुवै हुन सक्छ, यो imperative सबै उपलब्ध बजार अन्वेषण गर्न, मापदण्डहरू छ विशेषताहरु सबै। यो सबै भविष्यमा राउटर को प्रयोज्य असर हो।
धेरै तार विकल्प प्रतिस्थापन गर्न, एक 4G-इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहोस्। उत्तरार्द्ध वैकल्पिक सुविधाजनक छ र तपाईं उच्च गतिको रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ, तर यो यसको कमियां छ। तिनीहरूलाई को एक केबल खुला सार्न छैन भन्ने तथ्यलाई छ। केवल एक ठाउँमा हुन सक्छ इन्टरनेट प्रयोग गर्न, र केही मालिकहरूको लागि केही असुविधा ल्याउन सक्छ। मान्छे को सबै भन्दा एक मोडेम प्रयोग गर्न परिवर्तन किन छ। तिनीहरू जहाँ मालिक छ कुनै कुरा इन्टरनेटमा पहुँच प्रदान गर्न सक्छन्।
निर्धारण गर्न उपकरणको निर्माता उपकरणको प्रकार निर्धारण गर्नुपर्छ खरिद हुनुपर्छ, साथै जो मोडेल रूपमा चयन गर्न।
को 4G-मोडेम कसरी चयन गर्न, आफूलाई लागि हरेक व्यक्ति समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यो मूल्य र सेवा प्रदायक, साथै प्रयोगकर्ता को प्राथमिकता र जहाँ तिनीहरू बाँच्न मात्र छैन निर्भर देखि यो प्रश्न मा कुनै एकल जवाफ छ।
त्यहाँ routers, उपभोक्ताहरूको प्रसिद्ध उत्कृष्ट समीक्षा भएका छन् जो को मोडेल पनि छन्। तिनीहरूलाई केही यस लेखमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो मोडेम चयन गर्न र यसलाई दिन छैन अप, तपाईं सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, व्यवसायीक एक वा अर्को मोडेल अनुभव गरेका छन्, जसले उत्पादन, यसको मूल्य श्रेणी, साथै मालिकको समीक्षा को विशेषताहरु ध्यान गर्न आवश्यक छ, र। जब आफ्नै चासो र आवश्यकता विचार गर्न आवश्यक छनौट र पनि खातामा जहाँ उपकरण प्रयोग गरिनेछ क्षेत्र लिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, एउटा सानो संकेत समतल प्रदान गर्नेछ जो उपकरण आवश्यक छ भने, प्रविधी अल्काटेल देखि मनपरेको हुन सक्छ। त्यहाँ जहाँ नेटवर्क अपेक्षाकृत कमजोर छ ग्रामीण क्षेत्रमा गर्न राउटर मा एक आवश्यकता छ भने, यो एक अधिक महंगा उपकरण किन्न सर्वश्रेष्ठ छ, तर जो सही एक स्थिर मिश्रित प्रदान गर्न सक्छन्।
रूसी संघ को क्षेत्र मा एक विशेष मांग निर्माता Huawei छ। मालिक सकारात्मक समीक्षा आफ्नो प्रविधी पोखे। लोकप्रिय मोडेल मानिन्छ Huawei E392। एक विश्वव्यापी उपकरण र विशिष्ट नेट गर्न सिले: यो दुई संस्करण मा बिक्री गरिन्छ। 100 एमबी प्रति सेकेन्ड गर्न गति मा डाटा दिइरहनुभएको सक्षम 4G मोडेम को राय मा। यसबाहेक, बंदरगाह को एंटेना र मेमोरी कार्ड लागि यसलाई मा बनाए। उपकरण 4G, र अन्य नेटवर्क संग काम गर्न सक्छन्।
को E367 र E3276: एउटै स्तरमा उपभोक्ताहरु अन्य दुई मोडेल पहिचान गर्दै छन्। तिनीहरूले अघिल्लो संस्करण जस्तै हटाउन सकिने एंटेना संग काम गर्न सक्छन्। तिनीहरूले नेटवर्क बीच स्विच गर्न सक्ने क्षमता छ।
मालिकको चिनियाँ निर्माता देखि मोडेल कमीकमजोरी उल्लेख गरे। गम्भीर धेरै ठूलो मानिन्छ। यस कारण, यो मोड्युल प्रयोग गर्न गाह्रो छ। गलत स्थान बंदरगाहों उत्प्रेरित गर्नेछ भने केहि ओभरल्याप छन्। तथापि, विशेषज्ञहरु ध्यान दिनुहोस् कि आयाम - उच्च क्षमता र प्रभावशाली प्रदर्शन को एक परिणाम।
रूसी संघ को क्षेत्र मा पनि लोकप्रियता निर्माता अल्काटेल उठाउँछ। प्रविधिको प्रयोग को आफ्नो सकारात्मक छाप बताइरहेका मान्छे, उपकरण onetouch W800Z भन्छन्। यसलाई उच्च गति मा 4G इन्टरनेट संग ठूलो काम गर्छ, र 10 मान्छे सम्म निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ पहुँच बिन्दु प्रयोग गर्नुहोस्। राउटर3हजार। Rubles लागि बेचे। को minuses को उपभोक्ताहरु दायरा पनि सानो छ के भेद। त्यसैले, तपाईं 4G-मोडेम लागि संकेत एम्पलीफायर आवश्यक पर्दछ।
एक उपभोक्ता एक स्थिर प्रकार मोडेम देश वा घर मा प्रयोग गरिने पर्छ भने, यो कम्पनी ZYXEL देखि एक उपकरण किन्न सर्वश्रेष्ठ छ। ग्राहकबाट प्रतिक्रिया प्रभावशाली छ। तिनीहरूले सबैभन्दा सफल मोडेल LTE6100 विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले के मन? यो साधन एक तार द्वारा परस्पर जो दुई एकाइहरु, को हुन्छन्। यसको लम्बाइ 100 मिटर छ। किनभने एकाइहरूको यो एक राम्रो संकेत लागि घर को उच्चतम बिन्दुमा स्थापित गर्न सकिन्छ। पनि सबैभन्दा खराब संकेत फसाउन सक्षम छ कि एन्टेना शक्ति जस्तै मालिक। कमीकमजोरी बीचमा तिनीहरूले 4G मोडेम को मूल्य दर्शाउन। यसको लागि मूल्य बारे 12 हजार छ। Rubles।
मात्र सबै सम्भव सुविधाहरू विश्लेषण गरेर एक सबै को एक निर्माता साँच्चै पहिलो स्थानमा योग्य प्रस्तुत मान गर्न सक्नुहुन्छ। समीक्षा एक चयन गर्न यसबाहेक विवाद, वा अर्को विकासकर्ता अझै पनि आफ्नै प्राथमिकताहरू मा निर्माण लायक छ।
यो सबै उत्पादनहरु बजार र विशेषता पसलहरुमा प्राप्त गर्न शंकास्पद हुँदैन सम्झना गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछ, र व्यावसायिक सहायता प्रदान गर्न यो छ भने।
रूटर सेटिङहरू कसरी प्रवेश गर्ने? रूटर TP-लिंक र डी-लिङ्क कसरी प्रवेश गर्ने?
आफ्नो कम्प्युटरको लागि सस्तो मनिटर। अवलोकन सस्ती मनिटर, छनौट सुझावहरूको
राउटर TP-LINK TL-WR720N: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, वर्णन र मालिकको समीक्षा
सामना गर्न सकिन्छ भनेर अफ्ठ्यारो: कार्ड, "बैंक दूत" कसरी बन्द गर्न
म एक साथीको जन्मदिन के चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ? उदाहरण बधाई
एक बाढी के हो? कारण र बाढी को प्रकार
बकाइन फूल को औषधीय गुण: चिकित्सा र contraindications मा आवेदन।
एक गद्दा कसरी चयन गर्ने?
दबाइ "Nurofen गुण" कसरी प्रयोग गर्ने
Polyclinic "Amaryllis": सेवाहरू, सम्पर्क र ठेगाना